Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kanada » Sidee bay Mareykanku ugu safri karaan Kanada iyadoo la raacayo xeerarka cusub?
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Kanada Waxay U Furtay Xudduudda Dhulka Mareykanka Oo Si Buuxda Loo Talaalay
Go'aankani wuxuu dhiirri -gelin doonaa nooca soo -kabashada dhaqaalaha ee deriskeenna woqooyi oo si aad ah loogu baahan yahay dhinaca xadka.
Kanada waxay bilaabaysaa inay soo dhoweyso dadka Mareykanka ee tallaalka si buuxda loogu soo celiyey soohdinta dhulka.
Kanada waa isha ugu weyn ee suuqa safarka caalamiga ah ee Ameerika waxayna ku xisaabtantay 26 boqolkiiba dhammaan taraafikada gudaha ee 2019.
Ka -soo -bixidda masiibada waxay sii ahaan doontaa geedi socod adag oo is -bedbeddela.
Canada waxay si rasmi ah u furtay xuduudaheeda dhulka si ay si buuxda u tallaaleyso muwaadiniinta Mareykanka iyo deganayaasha joogtada ah ee Mareykanka 12:01 am Isniinta, Ogosto 9, 2021.
Dadka Mareykanka ayaa hadda booqan kara Kanada markii ugu horreysay tan iyo markii la soo rogay xayiraadaha safarka masiibada ee COVID-19. Tan waxaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay toddobaad ka hor.
Safarka Maraykanka Sidabulshada Madaxweynaha iyo agaasimaha guud Roger Dow ayaa soo saaray bayaankan soo socda ee ku saabsan qaadista xayiraadaha maanta ee socdaalayaasha Mareykanka ee si buuxda loo tallaalay ee xadka dhulka Kanada:
“Maanta, Kanada waxay bilaabaysaa inay soo dhoweyso Ameerikaan si buuxda loo tallaaley oo ku soo laabtay xadka dhulka. Go'aankan xigmadda leh wuxuu dhiirri -gelin doonaa nooca soo -kabashada dhaqaalaha ee deriskeenna woqooyi oo si aad ah loogu baahan yahay dhinaca xadka.
“Dib -u -furidda xadka dhulka ee Mareykanka si buuxda loo tallaalo dadka reer Kanada waxay astaan ​​u noqon doontaa bilow wanaagsan oo ku aaddan dib -u -dhiska dhaqaalaheena socdaalka, maamulka Biden waa inuu soo celiyaa go’aankan siyaasiga ah - marka la eego heerka tallaalka ee Kanada oo dhan - dib -u -dhac kale ma leh.
“Bil kasta oo socdaalku uu weli fadhiyo, Mareykanka wuxuu lumiyaa $ 1.5 bilyan oo dhoofinta dhoofinta suuragalka ah wuxuuna ka dhigaa ganacsiyo aan tiro lahayn oo Mareykan ah nugul.
“Kanada waa isha ugu weyn ee suuqa safarka caalamiga ah ee Ameerika waxayna ku xisaabtamtay 26 boqolkiiba dhammaan taraafikada gudaha ee sannadka 2019, oo qiimihiisu yahay $ 22 bilyan oo dakhli sanadeedka dhoofinta ah. Xitaa haddii safarka Kanada uu ku soo laabto kala bar heerarka 2019 inta ka harsan 2021, Mareykanka wuxuu goosan doonaa ku dhawaad ​​5 bilyan oo doollar - haddii siyaasadda Mareykanka oggolaato.
“Ka -soo -bixidda masiibadaani waxay sii ahaan doontaa geedi socod adag oo isbedelaya. Jawaabta ugu wanaagsan ee ka timaadda Aqalka Cad waxay noqon doontaa in la dejiyo siyaasado caqli gal ah oo la xiriira socdaalka caalamiga ah si loogu noqdo tusaale adduunka oo si ammaan ah oo xilkasnimo leh dib loogu furayo. ”